आँशु पुछ्दै सुशान्त खत्रीले भने : बिनाकसुर हिरासतमा राखियो ‘प्रहरीले बिना कारण थ’प्प’ड हा’न्यो’ - baideshikrojagar
कार्तिक १५, २०७८ कार्तिक १५, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on आँशु पुछ्दै सुशान्त खत्रीले भने : बिनाकसुर हिरासतमा राखियो ‘प्रहरीले बिना कारण थ’प्प’ड हा’न्यो’
चर्चित डान्सर सुशान्त खत्रीले आफूलाई प्रहरीले बिनाकसुर नियन्त्रणमा लिएर झा’पड हा’ने’को दावी गरेका छन् । फेसबुक लाइभमा आफ्नो पीडा पोख्दै प्रहरीको व्यवहारबाट मन दुखेको बताए ।
खत्रीका अनुसार उनलाई काठमाडौंको एउटा क्लवबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यहाँबाट सोह्रखुट्टे प्रहरीमा वृत्तमा लगेर एक घन्टा हिरासतमा राखिएको उनको भनाइ छ । उनले सुनाएको घटना विवरण यस्तो छ :
म हिजो राति एउटा नाइट क्लवमा साथीहरुसँग थिएँ । बन्द हुने टाइम भएपछि निस्कने सुरसार गरिरहेका थियौं । यत्तिकैमा प्रहरीहरु आएर हामीलाई बाहिर निस्किन दवाव दिए । मेरो विल तिर्न बाँकी थियो । त्यहाँ अलिकति कन्फ्यूजन भएका थियो । एकजना भाइले उहाँको विल भइसक्यो भनेछ । तर मेरो बाँकी थियो । मैले विल तिरेर निस्किहाल्छु भन्दा प्रहरीले मलाई हात हाले । मेरो काँधमा समातेर घिसार्दै बाहिर लैजान खोज्नुभयो ।
मैले सोधेँ, मेरो गल्ति के छ ? यसरी तपाईले दुव्र्यवहार गर्न पाउनुहुन्न । मेरो ज्याकेट काउन्टरमा छ । मास्क ज्याकेटमा छ । लिएर आउँछु । मात्र भन्दा एक्कासी उहाँले मेरो गालामा क’डा थ’प्प’ड हान्नुभयो । निकै क’डा थप्प’ड थियो त्यो । मैले यस्तो थप्पड जीवनमा कहिल्यै खाएको थिइनँ ।
त्यसपछि मलाई भ्यानमा हालेर सोह्रखुट्टे प्रहरी स्टेसनमा लगियो । त्यहाँ मेरो मोबाइलहरु पनि खोसियो । घरमा बुवाआमालाई फोन गर्न पनि अनुमति दिइएन । मलाई करिब एक घन्टासम्म जेलमा राखेर बल्ल छोडियो । म सेलेब्रिटी भएर होइन, एउटा जनताको रुपमा भन्दैछु, कसैलाई पनि प्रहरील यसरी हात उठाउन मिल्दैन । प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो । यदि प्रहरीबाटै असुरक्षित हुनुपर्छ भने कसको अपेक्षा गर्ने ?
म १२ वर्षदेखि यो इन्डष्ट्रीमा छु । नेपालका नाम राख्न भनेर विदेशमा संघर्ष गरिरहेको छु । तर, आफ्नै देशको प्रहरीबाट यस्तो व्यवहार हुँदा मन दुखेको छ । मेरो प्रहरीप्रति उच्च सम्मान थियो । मेरो बुवा पनि रिटायर्ड पुलिस हो । आजको घटनाले मलाई निकै नराम्रो छाप परेको छ । प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ ।
म प्रहरीबाट कलको पर्खाइमा छु । यदि कल आएन भने कानुनी कदम चाल्ने छु । म यत्तिकै चुप बस्दिनँ । ममाथि एकदमै गलत भएको छ । म यत्तिकै मुख छोपेर भाग्दिनँ । चुप लागेर बस्दिनँ । विदेशमा बसे पनि नेपालमा जन्मेको र हुर्केको हुँ । मलाई मेरो देशको माया छ । तर, आज असाध्यै मन दुख्यो र रातभरि सुतेको छैन । म चाहन्छु जनताले प्रहरीलाई सम्मान दिएका छन् भने, प्रहरीले पनि जनतालाई सम्मान दिनुपर्छ ।
मलेसिया रोजगारबारे बोल्यो दूतावास, मलेसिया कस्ता ब्यक्ति जान पाउने ?
शिद्धार्थ शुक्लाको यादमा शहनाज गिलले गाएको यो गीत युट्युवको ‘ट्रेन्डिङ १’मा (भिडियो हेर्नुस्)
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल वैशाख १ देखि उडानको तयारी, खाडीका यी देशबाट हुनेछ सिधा उडान !
कार्तिक ९, २०७८ कार्तिक ९, २०७८ देश परदेश
स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, यी हुन् रामधुलाई गर्ने अतिथि (भिडियो सहित)
अशोज २२, २०७८ अशोज २२, २०७८ देश परदेश
कार्तिक ७, २०७८ कार्तिक ७, २०७८ देश परदेश